Yaa kugulaysan doono Abaal Marinta Ballon d’Or ? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Yaa kugulaysan doono Abaal Marinta Ballon d’Or ?
Tartanka abaalmarinta Ballon d’Or ayaa u muuqta inuu yahay mid furan markii ugu horeysay muddo sannado ah.
Iyagoo qeybsaday lixdii sanno ee ugu danbeysay, midkoodna Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi kuma riyaaqin xilli ciyaareed cajiib ah, laakiin yaa ka soo dhex bixi doona oo ka qaadi doona abaalmarintaan labadaan laacib?
Waxaan eegeynaa ciyaartoyda tartanka ku jiri karta:
Ronaldo ayaa soo bandhigay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee Champions League isagoo dhaliyay 17 gool islamarkaana Real Madrid ku hogaamiyay La Decima. Inkastoo xilli ciyaareed niyadjab leh oo La Liga ah uu soo maray hadana waxa uu ku guuleystay gooldhalinta horyaalka ee Pichichi. Koobka Adduunka ayaase uu u ahaa mid niyadjab leh inkastoo aan isaga kaliya taas lagu eedeyn karin, ma uusan aheyn taam buuxa, ciyaartoydii caawineysayna waxa ay ahaayeen kuwa hoose. Geesinimada Ronaldo la’aanted Portugal kama soo baxdeen Play-offs mana gaarteen Brazil.
Haddii aad ciyaareyso kulan weyn islamarkaana ay tahay inaad dooratid ciyaaryahanka koowaad ee ku ciyaaraya, waxaad dooraneysaa Messi. Waxa ay u aheyd sannad qariib ah isagoo si weyn loogu dhaleeceeyay inuu ku guuleystay xiddigii ugu fiicnaa Koobka Adduunka ee abaalmarinta Golden Ball inkastoo uu bilowgii tartanka ahaa mid fiican. Sidii hore carcar uma aheyn taasna sababteeda waxa ay tahay in kooxaha ay haatan tamartooda oo dhan isagu geeyaan inay isgaa celiyaan.
Sannad la ciyaaray Koob Adduun, waxa ay u muuqataa mid aan aqbalaad laheyn inaan la dooranin xiddig ku guuleystay Koobka Adduunka, miyeeysan aheyn? Dadaalka Muller, la shaqeynta kooxdiisa iyo dhameystirkiisa aan jixinjixa laheyn ayaa ka dhigtay in Jarmalka ay qaadaan Koob Adduun, isagoo jira kaliya 24 sanno waxa uu noqday ciyaaryahankii labaad ee labo Koob Adduun oo isku xigta ka dhaliya min shan gool. Waxaa weli ka maqan awood xiddig ee magaca ah, laakiin fiiri sida Ribery uu taageerada badan u helay sannadkii hore.
Madaale dhanka weerarka ah islamarkaana ay difaacyada ku qarwaan, saameynta Robben ayaa dabcan keentay inuu Muller ka soo dhex muuqdo kooxdiisa iyo dalkiisa. Xiddiga reer Holland ayaa sannad kale oo cajiib ah la qaatay kooxda Bayern Munich oo ku guuleysatay Bundesliga, sidoo kalena wacdarro ayuu ku dhigay Brazil isagoo xulkiisa keenay kaalinta seddexaad. Malaha waxa uu ahaa xiddigii ugu fiicnaa Koobka Adduunka isaga iyo James Rodriguez.
Xiddiga reer Brazil ayaa sameeyay inuu ka soo gudbo xiddiga mustaqbalka oo uu noqdo xiddig weyn oo haatan jira Koobkii Adduunka laakiin taasi ma aysan waarin isagana qalad kuma laheyn, dhaawacii soo gaaray ayaana ka marqaati kacay sida ay Brazil u kala daadatay. Hubaashii waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu caansan ee adduunka, ka dib markii uu bilow jahwareer ah ku arka Barcelona waxa uu haatan bilaabayaa inuu saldhigto.
MAXAY NALA TAHAY ANAGA
Waxa ay isagu imaaneysaa haddii aad dooneysid inaad abaalmarinta siiso ciyaaryahanka ugu fiican (Messi), ciyaaryahanka ugu saameynta badan (Ronaldo), ciyaaryahanka ugu qaab ciyaareedka fiicnaa sannadkan (Robben) ama qof Koob muhim ah ku guuleystay sannadkan (mid ka mid ah xiddigaha Jarmalka)
Qaabka codeynta ee FIFA waa mid aad u jahwareersan, abaalmarinta waxaa lagu bixiyaa qaab ciyaareedka garoonka dhexdiisa iyo dabeecada ciyaaryahanka marka uu garoonka ku jiro ama banaankiisa marayo taasoo ka dhigeysa abaalmarinta mid shaqsiyadeed oo shaqsiyada qofka lagu bixiyo halkii lagu bixin lahaa wixii uu qabtay sannadka.